Maamulka Ximan iyo Xeeb oo diiwaangelinaya dadka tegaya Cadaado – Radio Muqdisho
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa sheegay in uu bilaabay diiwangalinta dadka ka qayb galaya shirka maamul u sameynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Wasiirka arrimaha gudaha Ximan iyo Xeeb Maxamed Xaaji Xuseen oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay koontarool adag ku sameyn doonaan dadka magaalada soo galaya, si loo aqoonsado qofkasta oo magaalada ku sugan.
“Waxyaabaha Wasaaradda u yaalla ee shaqadeeda ka mid ah ayaa ah inay la socoto dadka magaalada imaanaya, isla markaana la diiwaangeliyo, lana ogaado warbixinta dhabta ah ee qofka imaanaya, sidoo kale waxaan diiwaan geelinay marti kala duwan oo diyaar u ah ka qeyb galka shirka Maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud” ayuu yiri Maxamed Xaaji Xuseen.
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa hadalkiisa ku daray “Guddiga farsamada ayaa gacan nagu siinaya diiwaangelinta dadka, si aan u kala ogaano ergada iyo dadka kale ee iska imaanaya magaalada, si loo xoojiyo sugidda amniga magaalada Cadaado, maadaama lagu qabanayo shirka maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud”.
Qoysas ku nool Beladweyne oo loo qeybiyay raashin gar gaar